NACIIMA Abwaan Qorane oo facebook soo dhigtay qoraal dad badan damqay - Caasimada Online
Home Nolosha NACIIMA Abwaan Qorane oo facebook soo dhigtay qoraal dad badan damqay
NACIIMA Abwaan Qorane oo facebook soo dhigtay qoraal dad badan damqay
Muqdisho (Caasimada Online) – Naciima Abwaan Qorane ayaa barteeda facebook soo dhigtay qoraal xanuun badan oo dad badan damqaya oo ay kaga hadleyso dhibaatada Muuse Biixi iyo maamulkiisa u gaysteen qoyskeeda.
Naciima ayaa sheegtay in aabaheed oo xanuunsanaya aysan hadda awood u lahayn inay booqato. Hoos ka aqri qoraalkeeda
Walaalkay geeridiisii ayaa aan tagi kari waayay Hargeysa. Aabbahay oo xanuusan ayaa aan idhi wixii dhacayaa ha dhacaane tag! Markii aan tagay ayaa aan 4 bilood oo xabsiya lay diray, waliba sida ugu xun ee qof loola dhaqmo ayaa layla soo dhaqmay. Xuquuq kale oo lay siiyaa hayga joogta e, aniga oo xabsiga ku dhex xanuusan ayaa lay diiday hal xabbo oo kaniin xanuun baabiiye ah.!!!!
Aniga oo dulmane ah ayaa layga dhigay dambiile qaran oo laygu yidhi “Qaran dumis ayaa aad tahay!!” Saddex sanno inta laygu xukumay ayaa haddana la yidhi waa aannu ku cafinnee magaalada ka bax, inta aad joogtidna ma hadli kartid!!!! Muwaadin ayaa dalkiisa laga saarayaa sidii Tahriibe Sucuudi jooga!!!
Taliska Muuse dawladnimada ba waxa uu u haystaa in dadka lagu cabudhiyo!!! Malahayga xisaabtaba kumay darin, dadka aad maanta ku tacadiyeysaan berrito in ay iyagu talada dalkan qaban doonaan!!!
*Tahay dacaddi joogiyo
*Anigaa dirays qaba
*Taliskii dorraad jiray
*Horta maxaad u dumiseen??
Aabbo ayaa aad u xanuusan ayaamahan. Aabbo Eebbe Weyne haku caafiyo isaga ayaa awood lehe.